Gannat Zawudee (PhD): ‘Barumsa sadarkaa tokkoffaa miti lammaffaanu afaan dhalootaan ta’u qaban jedha' Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGannat Zawudee (PhD): ‘Barumsa sadarkaa tokkoffaa miti lammaffaanu afaan dhalootaan ta’u qaban jedha’
Gannat Zawudee (PhD): ‘Barumsa sadarkaa tokkoffaa miti lammaffaanu afaan dhalootaan ta’u qaban jedha’
EMBASSY OF ETHIOPIA, NEW DELHI
(bbcafaanoromoo)—Isaan keessaa imaammatni barnootaa haaraan yommuu ka’u maqaan isaanii waliin kan yaadatamu Gannat Zawudee [PhD] waliin gaaffif deebii taasifne qabannee dhiyaanneerra.
Bara 1993 dura Keeniyaa yuunvarsiitii Keeniyaataatti ‘external examiner’ [Yuunvarsiitiin biraa irraa nama ramadamuun qormaata nama kennu] tahuun tajaajilanii ture. Yeroo sana Yuunvarsiitii Finfinnee keessa hojjechaa turan.
Aadde Azeb Masfin waa’ee abbaa warraa isaanii waan jedhan
Dabalataan kitaabota lama ”Itiyoophiyaatti qabsoo dubartootaa kan jedhuu fi kan lammaffaan Afaan Ingiliffaan qofa kan bahe ”No One Left Behind” kan jedhu barnoota irratti kan xiyyeeffatudha jedhame maxxansiisaniiru.
Sagantaa Televizhinii qaban ture. ”Ye Hiywot Weg” sagantaa jedhamu kan Televizhinii Waaltaa irratti darbudha.
‘Barnoota keenya al takkaa dhaabbannee haa ilaallu’
Imaammatni Barnootaa bara hoggansa keessanii irraa eegalee dadhabaa deeme jedhamuun yeroo qeeqamu dhagahama. ”Ijoolee Gannat Zawudee” maqaan jedhamus kennameeraaf. Kana dhaggeessanii beektuu?
Amma erga soorama bahee waggootni sadii darbaniiru. Kanaafuu waggoota 13’f imaammata barnootaa kana irraa fagaadheera jechuudha.
Osoon yeroo qabaadhee gadi taa’ee inni jedhamu dhugaamoo soba jedhee qoradheera tahe natti tola. Garuu akkas hin goone. Amma immoo qorachuuf dulloomeera.
Waan natti fakkate barreessee kanaan dura kaa’eera. Dhalootni ammaa immoo wal harkaa fuudhee qaqajeelchuun hojii irra oolchuu danda’a.
Akkuma barnootni ammayyaa babal’ataa dhufeen qorannoowwan hedduun bahaa turan. Ijoolleen afaan haadha isaanii kan itti afaan hiikkataniin jalqaba barachuu qabu.
Baay’ee, baay’ee!….ammas tahu fuuldurattis kana irratti nan falma. Sitti himuu?
Daa’ima waggaa shanii fi jahaa afaan isaan burraaqee guddate fiddee kutaa tokko galchitee afaan gara biraan baradhu jechuun sirriidha jettaa?
Kana qofaa osoo hin taane kun daa’imaaf ni taha jettaa? Waan salphaa miti. Daa’imni afaan isaa waliin wal qabata.
Jireenya kootti gammadeen jiraadha… ‘I am happy with my personal life’. Gaa’ila koo akkan diigeeru beekta jedheeni. [Kolfa]. Garuu gammadeen jiraadha. Ijoolleekoo waliin hariiroo gaariin qaba.
Filannoon keessan garuu kam fa’a ture?
Yeroo keenya ‘Agaataa Kiristii, Danellaa Istiil’, Itiyoophiyaa keessaa immoo ‘Fiqir Iske Meqaabir’ Fiqir Iske Meqaabir yeroo sadiin irra deebi’ee dubbise.
Akkasumas kitaabota kanneen akka ‘Oromaay’, ‘Wenjelenyaaw Daanyaa’ dubbiseera. Dur akkoon koo kitaaba dubbisti ture, Anaanis akkan kitaaba dubbisu kan na barsiifte isheedha.
Muuziqaa fi Iskistaa baay’een jaalladha. Ammayyuu jira Iskistaan, xiqqoo dulluma waliin jilbi koo akka durii miti malee.
Aster, Buziyyee, Xilahun Gessesee ,fi keesumaa immoo walaloo Bazzaawarqi baay’een jaaladha.
”Yemaannesh yilunyaal ,yemaan libelaachaw (Ati kan enyuuti naan jedhu, kan eenyuudhan jedhaanii)
Bichaayen biqaris, min ascheneqaachaw” (Osoon qofaa hafes, maaltu isaan dhiphise)
SBO: Bor Fulbaana 15,2019. Waggaa tokkoffaa hogganni ABO itti biyya galee
Vocabulary of the year አቶ አሻግሬ! There are things that the power of the military cannot fix; which are to win the hearts and minds of the oppressed people.